जो बाइडेन बने आमेरिकि रास्ट्रपति , यस्ता छन् बाइडन जीतका ५ कारण
Published 8 November 2020 1 min read
झन्डै पाँच दशक लामो सार्वजनिक जीवन र जीवनभर एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थिए, जो बाइडेन । उनको त्यो उद्देश्य थियो– ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्नु । अन्ततः आफ्नो लामो समयको इच्छा र चाहनामा उनी सफल भएका छन्, उनले अब ह्वाइट हाउसमा प्रवेश पाएका छन् ।
अहिले अमेरिकामा भएको निर्वाचन कसैले पनि सोचेको जस्तो भएको थिएन । कसैले पनि यसलाई सहज रुपमा पनि लिएको थिएन । सदियौँमा एक पटक आउने विश्व महामारीबीच भएको यो निर्वाचन अभियान त्यहाँ सुरु हुँदा नै राजनीतिक अस्थिरता अमेरिकामा देखिएको थियो । त्यसैले कतिले यसपटक निर्वाचन फेरि ट्रम्पले जित्ने अनुमान पनि गरेका थिए ।
तर, ती अनुमानहरु गलत भए । बाइडेन अब अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
यसका कारण के होलान् ?
डेलावेयरमा कार बेच्ने व्यक्तिका छोरा बाइडनले राष्ट्रपति चुनाव जित्नुमा प्रमुख पाँच कारण छन् ।
बाइडन राष्ट्रपति बन्नुमा सबभन्दा ठूलो कारण कोभिड हो । यस महामारीले अमेरिकामा दुई लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ र सन् २०२० मा अमेरिकी जीवन र राजनीतिलाई उलटपुलट पारेको छ ।
आमनिर्वाचन अभियानको अन्तिमतिर आएर बल्ल डोनल्ड ट्रम्पले यसलाई स्वीकारे ।
‘झूटो समाचार दिनेहरूका लागि सबैथोक कोभिड, कोभिड, कोभिड हो,’ राष्ट्रपतिले विस्कोन्सिनमा अघिल्लो साता आयोजित एक भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए ।
जनताको चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्नका लागि मिडियाले कोभिडमा ध्यान दिएका हुन् । राष्ट्रपतिले कोरोना संकट व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले जनताले दण्ड दिए ।
अघिल्लो महिना प्यु रिसर्चले गरेको सर्वेक्षणमा कोभिड व्यवस्थापनको सवालमा ट्रम्पको तुलनामा बाइडन बढी सक्षम साबित हुने छन् भनी १७ प्रतिशत बढी मानिसले मत दिएका थिए ।
ट्रम्पले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको सन्देशलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेको भए पनि महामारी र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक अवनतिले उक्त सन्देशलाई फितलो बनाइदियो । महामारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, विज्ञानमाथि प्रश्न गर्ने, साना तथा ठूला नीतिमा लथालिंगे पारा देखाउने र आफ्ना समर्थकप्रति पक्षपाती रहने ट्रम्पको बानीले अमेरिकीहरूलाई चिन्तित बनाएको थियो । महामारी व्यवस्थापनमा चुकेकाले ट्रम्पको समर्थन सूचकांक घट्यो र बाइडनले त्यसको फाइदा उठाए ।
२. शान्त चुनावी अभियान
आफ्नो राजनीतिक करीयरमा बाइडनले बोलीमा नियन्त्रण नराख्दा आफैंलाई समस्यामा पार्ने गरेका छन् । सन् १९८७ मा पहिलोपटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नका लागि लड्दा उनले अवाञ्छित कुराहरू बोलेर आफैंलाई कुठाराघात गरे । सन् २००७ मा फेरि एकपटक उम्मेदवार बन्न खोज्दा पनि उनको हाड नभएको जिभ्रोले उनलाई धोका दियो ।
तेस्रो प्रयासमा पनि उनले अनेकौं गल्ती त गरे तर त्यसले उनलाई तात्त्विक असर पारेन ।
यसको एउटा कारण चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पको अझ जब्बर अनियन्त्रित बोली पनि हो । अनि अमेरिकामा कोरोना महामारी, जर्ज फ्लोयडको मृत्युपछि भएका प्रदर्शन र आर्थिक उथलपुथलले देशको ध्यान खिच्दा पनि बाइडनको अभिव्यक्तितर्फ धेरैको ध्यान गएन ।
तर बाइडनको निर्वाचन अभियानले उनलाई कमै मात्र एक्सपोजर दिएको र दौडादौड नगराएकोले पनि राम्रो काम गर्‍यो । नत्र थाकेको सुरमा वा भूलवश उनले बोलेको कुराले समस्या ल्याइदिन सक्थ्यो ।
यस निर्वाचनमा ट्रम्पको मुखले उनलाई धोका दिएको भन्नुपर्छ ।
३. ट्रम्प बाहेक जोकोही
बाइडनले राष्ट्रको आत्माका लागि भन्ने चुनावी नारा दिएका थिए । ट्रम्प अत्यन्तै विभाजनकारी र उत्तेजक भएकाले अमेरिकी जनतालाई शान्त र स्थिर नेतृत्व आवश्यक छ भनी बताउनु त्यसको आशय थियो ।
डेमोक्रेटहरूले यस निर्वाचनलाई दुई उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि ट्रम्पमाथिको जनमतसंग्रहका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
बाइडनले आफू ‘ट्रम्प नभएको’ भनी दिएको सन्देशले नै उनलाई विजयी बनायो । बाइडनको जीतले अमेरिकीहरूलाई राजनीतिका बारेमा नसोचिकनै हप्तौं बिताउन सकिने डेमोक्रेटहरूको साझा भनाइ रह्यो । हुन त त्यो मजाक थियो तर त्यसमा सत्यको अंश छ ।
४. मध्यमार्गी उपाय
डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवार बन्ने अभियानका क्रममा बाइडनलाई वामपन्थी खेमाबाट बर्नी स्यान्डर्स र एलिजाबेथ वारेनबाट चुनौती आयो । उनीहरूको अभियान आर्थिक रूपमा बलियो थियो र त्यसमा भीड पनि व्यापक आएको थियो ।
उदारवादी खेमाबाट दबाब परेको भए पनि बाइडन मध्यमार्गी रणनीतिमा अडिग रहे । उनले सरकारी स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा वा सम्पत्तिमा कर लगाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन् । यसले गर्दा मध्यमार्गीहरूमाझ र असन्तुष्ट रिपब्लिकनहरूमाझ उनको अपील बलियो बन्यो ।
बाइडनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु पनि यही रणनीतिको हिस्सा हो जबकि उनी पार्टीको वामपन्थी धारबाट कसैलाई उम्मेदवार बनाउन सक्थे ।
वातावरण र जलवायु परिवर्तनका सवालमा बाइडनले स्यान्डर्स र वारेनसँग निकटता देखाए । इन्धन ऊर्जामा आश्रित स्विङ स्टेटका मतदाताहरूलाई चिढ्याएर भए पनि स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने जवान मतदाताहरूलाई अपील गर्नु सही हुने उनको सोच रह्यो ।
५. धेरै पैसा, कम समस्या
सन् २०२० को आरम्भमा बाइडनको निर्वाचन अभियानमा पैसाको अभाव हुन थालेको थियो । उता ट्रम्प चाहिँ एक अर्ब डलर जति खर्च गरिरहेका थिए ।
तर अप्रिल महिनापछि बाइडनको निर्वाचन अभियानले व्यापक मात्रामा पैसा उठाउन थाल्यो । अक्टोबर महिनामा आइपुग्दा बाइडन अभियानसँग ट्रम्पको भन्दा साढे १४ करोड डलर बढी रकम थियो जसले गर्दा उसले सबै महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा टेलिजिभन विज्ञापनको बाढी नै ल्यायो ।
त्यसो त पैसा नै सबैथोक हैन । चार वर्षअघि क्लिन्टनले पानीको खोलो बगाएकी थिइन् भने ट्रम्पले थोरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका थिए ।
तर सन् २०२० मा कोरोनाका कारण अधिकांश अमेरिकीहरूले घरैमा बसेर मिडिया हेरिरहे । यस्तो अवस्थामा बाइडनसँग भएको बढी नगदले पछिसम्म पनि उनलाई मतदाताहरूमाझ बढी पहुँच दियो । उनले टेक्सस, जर्जिया, ओहायो र आयोवा जस्ता रिपब्लिकन किल्लाहरूमा पनि पैसा खर्च गर्न सके । सबै राज्यमा त उनलाई फाइदा भएन तर एरिजोना र जर्जियामा उनको अग्रता हुनु आक्रामक प्रचारबाजीकै कारणले गर्दा हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बधाई
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बधाई दिएका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसलाई ओलीले ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका हुन् । > Heartiest congratulations to President-elect @JoeBiden [https://twitter.com/JoeBiden?ref_src=twsrc%5Etfw…
आईपीएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदरावाद भिड्दै
International 15 September 2020
भारतीय नेताहरू चीनकाे निगरानीमा
International6September 2020
कहिलेसम्म आउला काेराेनाकाे भ्याक्सिन ?
Science & Technology 27 August 2020
टिकटकका प्रमुख कार्यकारीले दिए राजीनामा
International2November 2020
कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएपछि डब्लुएचओ प्रमुख क्वारन्टीनमा
International 30 October 2020
भारतको नक्शा गलत देखाएको कारण ट्विटरले लिखित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने